Dadka reer Uganda oo saaka u dareeray doorashada Madaxtinimada dalkaas – STAR FM SOMALIA
Dadweynaha reer Uganda ayaa maanta u dareeray doorashada Madaxtinimada dalkaas, iyagoo saaka aroortii la furay goobaha cod bixinta.
In ka badan 15 milyan oo ruux ayaa la filayaa inay ka qeyb qaataan codeynta doorashada Madaxtinimada dalkaas, waxaana dadka ay safaf u geli doonaan goobaha la dhigay sanaadiiqda.
Ammaanka dalka Uganda ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo ciidamo fara badan la dhigay wadooyinka magaalada iyo goobaha la geeyay sanaadiiqda cod bixinta.
Illaa sideed Musharax oo uu ku jiro Madaxweynaha talada haya ayaa ku loolamaya tartanka Madaxtinimada, waxaana maalmihii u dambeeyay ay wadeen olole xoogan.
Musharaxiinta Kizza Bisegye iyo Amama Mbabazi oo horay u soo noqday Ra’iisul Wasaare ayaa laga yaabaa inay tartan adag la galaan Madaxweyne Museveni.
Musharax kasta ayaa laga doonayaa inuu helo in ka badan %50, si uu ugu guuleysto tartanka doorashada, waxaana Guddi ka socda Midowga Afrika ay si gaar ah isha uga hayaan doorashada.
Si kastaba ha ahaatee Madaxweynaha talada haya Yoweri Museveni oo muddo 30-sano soo xukumayay ayaa laga yaabaa inuu ku guuleysto tartanka Madaxtinimada.